3 Trial ee Kiiska Musiibada tareenka Çorlu | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara59 CorluDhageysiga 3 ee Musiibada Musiibada ee Çorlu
10 / 12 / 2019 59 Corlu, 59 Tekirdag, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
dhageysiga kiiska musiibada ee dhageysiga saddexaad
Dhageysiga 3 ee kiiska musiibooyinka Çorlu; Degmada Çorlu ee Tekirdağ, 25 dad ayaa ku dhintey, 328 dad ayaa ku dhaawacmay shil tareen 3'inci ayaa bilaabmay.
Istanbul oo ka socota degmada Uzunköprü ee Edirne HalkalıRakaabka 362 iyo shaqaalaha 6 ayaa tabobaxaya, u dhaqaaqaya tagaya 8 Luulyo 2018'de Corlu degmada Tekirdag ee u dhow Sarılar Neighborhood wuu kharribmay. 7 carruurta, dadka 25 ayaa la dilay iyo dadka 328 waa la dhaawacay.
Agaasinka Gobolka ee TCDD 1, oo lagu helay inuu ahaa cilladdii ugu weyneyd ee shilka by Çorlu Chief Xeer Ilaaliyaha Guud ee Çorlu Halkalı Turgut Kurt wuxuu u shaqeeyey Maareeyaha Dayactirka Wadada Tareenka ee 14 Maareeyaha Dayactirka Jidadka Çerkezköy Özkan Polat, Madaxa Dayactirka iyo Dayactirka Wadooyinka ee Agaasinka Dayactirka Wadooyinka, Celaleddin Çabuk, oo ah sarkaalka dayactirka iyo dayactirka ee madaxa dayactirka wadooyinka, iyo Çetin Yıldırım, oo ah saxeexa madaxa buundooyinka Çetin Yıldırım oo isagu saxeexay saxeexisa warbixinta kormeerka sanadlaha ah ee dadweynaha. Maxkamadda Çorlu 2'inci Maxkamadda Sare ee Ciqaabta ayaa la xukumay iyagoo dalbanaya in xabsi laga dhigo 15 sanad walbo ilaa sannadaha 1'er.
BADBAADADA HADALKA tijaabada koowaad
Maxkamadaynta ayaa ka bilaabatay bishii Luulyo maxkamadda cadaaladda ee Çorlu ee hoolka shirarka ee 3, oo loo qabtay maxkamadda ciqaabta culus ee 1. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah ehelka iyo dhaawaca dadka dhintay, looma qaadin sababaha inaysan qol ku jirin hoolka. Dhacdooyinkaas ka dib, dhageysiga waxaa loo qaaday 130 July Hall oo ku yaal Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Çorlu ee Çorlu Çoban Çeşme Neighborhood Bülent Ecevit Boulevard.
Maanta, kahor dhageysiga 3, booliisku waxay qaateen talaabooyin amniga aad u ballaaran. Kooxo boolis ah oo ka socda xarunta gobolka ee Tekirdag ayaa la keenay xoojin. Qalabka raajada waxaa lagu rakibay albaabka Xarunta Waxbarashada Dadweynaha. Meelo galitaan ah oo gooni ah ayaa loo sameeyay qareennada, dhibbanayaasha, daawadayaasha iyo xubnaha saxaafadda. Qolka dhageysiga, dhageystayaasha waa la baadhay oo la qaatay.
'WAA IN AAN CADAALADNIMADA'
Ehelka dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilka, maxkamadaynta, Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Çorlu oo laga soo ururiyey masaafo qiyaastii ah kiiloomitir 1, socday, ayaa timid. Qoysaska sidda sawirrada kuwa gacantooda ku dhintay, 'Xuquuqda, caddaaladda sharciga', 'Dhimashada shilalka,' ayaa tuuray halkudhigyo.
Zihra Bilgin, oo waayey gabadheeda Bihter Bilgin, walaasheed Emel Duman iyo Derya Kurtuluş, ayaa yiri, “Maanta waa maalinta 520. Filo cadaaladda maalmaha loo yaqaan '520 maalmood'. Qofna ma ilaaliyo. Qof kasta oo ku jira silsiladdan dayaca, ka hooseeya ilaa kan ugu sarreeya. Haddii wasiir mas'uul yahay, wasiirka waa in la tijaabiyaa oo maamulaha iyo garsooraha la tijaabiyaa heerka ugu hooseeya. Waxaan rabnaa oo kaliya waa cadaalad. ”
Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, qoysaska dadka dhintay, kuwa dhaawacmay iyo qareenada ayaa goobjoog ka ahaa dhageysiga. Qareenka Can Atalay, oo qaatay eraygii ugu horreeyay ee dhageysiga dacwada kadib aqoonsiga, wuxuu cadeeyay in maxkamada ay go aansatay inay weydiiso liiska xubnaha kuliyadaha sameynta khabiiro cusub oo aqoonsi u leh aqoonyahanada jaamacadaha. Qaabkaas, ka-ceyrin xafiiska dowladda waa mid aan la aqbali karin. Jaamacada Farsamada Yıldız xitaa kama aysan soo jawaabin warqaddan
Dhageysiga ayaa sii waday maragfiiqa dacwoodayaasha. Ceyhan Kahveci, oo ku dhaawacmay shilka, ayaa caddeeyey inay wada leeyihiin shil weyn ka hor shilka oo yidhi, ucu Natiijadii ka soo jabtay maraakiibta, ayaa naloo tuuray oo saqafka ayaan ku garaacnay. Ilkahaygu wuu jabay. Jidhkeygu wuxuu ku dhacay jidhkayga. Waxaan ka cabanayaa. ”
'WAA U DILAY INAAD OGAATO'
Salih Erbil wuxuu ku waayey xaaskiisii ​​Salih Erbil shil, waxay ka qeybgashay dhageysiga iyadoo ay wehelinayaan gabadhooda Gülgen iyo Gülşen. Gülgen Erbil wuxuu yidhi, waxaan aadey ayeeyaday. Roob yar ayaa jira, sidee shilkan u dhici karaa, adeer? Kumaa dilay 25, Adeer garsoor? Aabahaa miyuu dhintay da'daada? Garsooraha Adeerka ah, dayacaad baa jirta. Shil tareen ma ahan roobkaan. Kumaa dilay aabbahay, adeerkiis adeer? U Tiny Gülgen'in ereyadan ku saabsan ereyada hoolka ayaan xukumi karin.
'Waxay dhaheen waxaan weydiin doonaa garsooraha xaakinka'
Isagoo la hadlayey gabadhiisa kadib, Saliha Erbil waxay u sheegtay gabdhaheeda inuu ku aaminay dhiigga aabihiis adeerka garsoorayaasha, waxayna sheegtay in gabdhaha yaryar ay sidoo kale rabeen inay maxkamada yimaadaan. Waxaan u idhi waxaan aamminsanahay dhiigga aabbahaa adeerkiis. Caruurteyda waxay yiraahdeen waxaan weydiisaneynaa adeerka inuu nafsadeena xukumo. Waxay yiraahdeen annaga ayaa iska imaan doonna. Waxaan u dacwoonayaa aniga oo ku hadlaya magaca carruurtayda. Waxaan ka cawdaa kor iyo hoos, ”ayuu yidhi.
Remzi Güvenç wuxuu yiri, “Waxaa iga waayey labo gabdhood iyo labo ayeeyo ah. Dhammaantood dhulka ayay ka hooseeyaan. Waxaan rabaa inaan ku lug yeesho kiiska, waan dacwoonayaa ”. Intaa ka dib, maxkamadda ayaa ballan qaaday kuwa aan lagu soo darin eedeynta oo doonaya in ay ku lug lahaadaan kiiska.
'MAAMULKA DIIWAANKA MAAMULKAR
Turgut Kurt, oo kamid ah eedeysanayaasha, ayaa ku sheegay marqaatigiisa marki la dhageysanayay dhageysiga in agaasinka dambiileyaasha uu ku jiray barnaamijka dayactirka. Isaga oo sharraxaya in Injineerada ay hawla sahamin ka sameynayaan duurka, ayuu Kurt yiri: Sida laga soo xigtay isaga, wax ka qabashada waxaa loo sameeyay meelaha maqan iyo cilladaysan. Injineerada ma aysan arkin baahida loo qabo haysashada ballaarinta goobta ay munaasabaddu ka dhacday
Eedeysanaha Özkan Polat ayaa sheegay in kadib markii soo helitaanka Injineerada ay ku dhegeen agaasimeha dayactirka, wax ka qabashada loo arkay inay lama huraan tahay.
Celalettin Çabuk, oo sheegay inuusan ka qeybqaadanayn wax shaqo baarid ah, wuxuu sheegtey in howlihiisu ay ka dambeeyeen isaga oo uusan ka qeyb qaadan howlihii sahaminta.
Dhageysiga waxaa lasiiyay duhurkii.
Xigasho: Da'da Cusub
Maxkamad Tacliin ah oo La Xiriiraayo
Qoysaska Dadka Loo Yeeray Nololkooda Koorlu Tababaridda Musiibo Bilowga Awood
Dhibaatada Mustaqbalka ee Çorlu
Misra Oz Sel oo wiilkeeda ku weyday musiibada tareenka ee Corlu ayaa furay labo baaritaan
Saraakiishii Ciidamada Xawaaraha Sare ee Xawaaraha Xawaaraha Sare Oo Gaadhsiiyay Qandaraaslaha Mashruuca